कांग्रेसमा सर्यो एमालेको रोग, बन्यो समानान्तर कमिटी « Janata Times
सुर्खेत, असोज १६ । पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डसँगको सहकार्यको परिणाम समानान्तर कमिटी बेहोर्न बाध्य एमालेको रोग अव कांग्रेसमा सरेको छ । प्रचण्डकै सहकार्यमा नेपाली कांग्रेस रहेको बेला कर्णाली प्रदेशबाटै कांग्रेसमा पनि समानान्तर कमिटी निर्माणको काम अघि बढेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको बिपक्षमा रहेको बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुहले हुम्लमा समानान्तर कमिटी निर्माण गरेको हो ।
हुम्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (क) मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले समान्तर कमिटी गठन गरेको छ । पौडेल समूहबाट प्रदेश (क) मा लोकेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी गठन भएको हो । फर्जी मतदानको विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पौडेल समूहले गाउँ, वडा र जिल्लामा पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्ने जनाएको छ ।
मतदान अधिकृत राजबहादुर ऐडीले मनोमानी ढंगले निर्वाचन गरेपछि आफूहरुले समान्तर कमिटी बनाएको पूर्वसांसद रीता शाहीले जानकारी दिनुभयो । ‘फर्जी मतदान गरेपछि हामीले समान्तर कमिटी बनाएका छौं,’ शाहीले भन्नुभयो, ‘एकलौटी रुपमा चल्ने पार्टी हैन ।’
हुम्ला जिल्ला पूर्वपर्यटनमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको गृह जिल्ला पनि हो । कांग्रेसको सातौं जिल्ला अधिवेशनसमेत पौडेल समूहले बहिष्कार गरेको पूर्वसांसद शहीको भनाई छ ।
काठमाडौँ, मंसिर ६ । बराहताल गाउँपालिका–५ सुर्खेत बड्डीचौरबाट तीन थान दुर्लभ चितुवाको छालासहित चारजना पक्राउ
कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ मा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन
काठमाडौं, २८ कार्तिक । महेन्द्रनगर । नेकपा एमाले कञ्चनपुरले क्षेत्र नं. ३ मा सर्वसम्मत ढंगले
राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले फेर्‍यो तीन प्रदेश प्रमुख
काठमाडौं, २३ कार्तिक । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनैतिक प्रतिशोधका आधारम तीन वटा प्रदेशमा
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अनौपचारिक बैठक : भीडभाड कम गर्न आग्रह
काठमाडौ, १५ कार्तिक । केन्द्रीय सुरक्षा समितिकोे अनौपचारिक बैठकले चाडबाडका समयमा भीडभाड बढ्न सक्ने भएकाले
एमाले उमाकुण्डमा रुद्रमणि बने अध्यक्ष, यी हुन नयाँ पदाधिकारी (नामसहित)
रामेछाप, कात्तिक ९ । नेकपा एमाले उमाकुण्ड गाउँकमिटीको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आज सम्पन्न
एमाले काठमाडौं महानगर-७ को अध्यक्षमा दिपेन्द्र पुडासैनी, यी हुन पदाधिकारीसहित निर्वाचित टीम
काठमाडौं, कात्तिक ६ । नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ वडा कमिटीको अध्यक्षमा दिपेन्द्र
२ दिन मै १० लाख बढीले भरे सामलिङ्गको आईपिओ
काठमाडौं, कात्तिक ६ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको आईपिओमा दोस्रो दिनसम्ममा १९ गुणा